မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုပြန်လည် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ထူထောင် တည်ဆောက်ရေး တမ်းချင်း - Yangon Nation News
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုပြန်လည် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ထူထောင် တည်ဆောက်ရေး တမ်းချင်း
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုပြန်လည်
ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ထူထောင် တည်ဆောက်ရေး
ယခု (၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည်
(၂၀၁၀ ) နှင့် အထူးသဖြစ် (၂၀၁၅) ၏
ဒုတိယလိူင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယ လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပါတယ်၊
မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် အလွန်ပင် အရေးကြီး လိုအပ်လှပါတယ်။
သို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဖြစ်စဉ်များ၊ ဖြစ်လာခဲ့ရသည့်…
ပြသနာ အရင်းအမြစ် များ၊အပြင် လက်ရှိ ခေတ်သစ်၏ မြေပြင်အ ခြေအနေများကိုသိဘို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ခါတရံမှာ နိုင်ငံရေး၌ စေတနာသည် အဓိကမဟုတ်ပါ၊
မိမိလုပ်လိုက်သော အလုပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဖြစ်အပျက်များကသာလျှင် အဓိကဖြစ်သည်ကို ထိုသူတို့က ကောင်းကောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
သတိပြုနိုင်ဘို့လည်း စဉ်းစား ဆင်ခြင်
အဖွဲ့အတွင်းမှာ တူရာ တူရာ စုကြတာကတော့ လူတွေ ရဲ့ သဘာဝဘဲဖြစ်ပါတယ်၊
သို့ပေမယ်လို့ ထိုသို့ တူရာ တူရာ စုကြခြင်းသည် အဖွဲ့၏ မှန်ကန်သော အားဖြစ်ဖို့လိုအပ်သလို မိမိတို့ တိုင်းပြည်အတွက် ခွန်အားတွေလည်း ဖြစ်စေကြရပါမယ်။
သို့ပေမယ့် ယခုကာလမှာ ဖြစ်နေကြတာက
အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ဆရာမွေး တစ်ပည့်မွေး ပြီး ကိုယ့်အုပ်စုက ကိုယ်ဖြစ်ခြင်သလိုလုပ်မယ်၊
အခြားသူတွေ မည်ကဲ့သို့ပင် တတ်သိ လုပ်နိုင်ပါစေ၊ ၎င်းသူကို အုပ်စုလိုက် အပုတ်ချ ပုတ်ခတ် စွက်စွဲ ပြီး ဖြုတ်ချ လိုက်မယ်၊ ဆွဲချလိုက်မယ်၊ ဟူသည်များကို တွေ့နေကြရပါတယ်။
ဤသည်က မိမိတို့တိုင်းပြည်၊ မိမိတို့ဒေသ၊ မိမိတို့ပြည်သူ များနှင့် မိမိအဖွဲ့စည်းအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ သဘောထားနဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ရပါဘဲ ဆိုးရွားတဲ့ သဘောထား သေးသိမ်မူနဲ့ လုပ်ရပ်သာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတစ်ဦးခြင်းက တတ်ကျွမ်း နားလည်မူမရှိပေမယ့် ကံကြမ္မာကြောင့် အဖွဲ့စည်းမှာ ပေးပိုင်ရွေးချယ်ခွင့် မဲတစ်မဲ အသုံးချ ပိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာ ရပြီဆိုပါက အသေအခြာ စဉ်းစားတတ်ကြရပါမယ်။အဲလောက်တော့ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ကြမှာပါ။
မိမိက မဲပေးရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူဟာ မိမိဒေသနဲ့ မိမိဒေသခံပြည်သူများအတွက်…
ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာတွေ လုပ်ပေး၊ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလဲ ?
ဒါက ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ သက်ဆိုင်ရာဒေသ တာဝန်ခံများကို ထားကြရမှာသည်လည်း အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုတာဝန်ခံသည် သူတာဝန်ယူရသည့် ဒေသနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးလှပါတယ်။
၎င်းဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူအားကောင်းလာစေရန် နဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နည်းပါးစေရန်မှာ ထိုတာဝန်ခံ၏ တာဝန်နဲ့ ဝတ္တရားဖြစ်ပါတယ်။
မိမိနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့သူ မိမိနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူကို စဉ်းစားပြီး ထိုသူက အရည်အချင်း ရှိခြင်း မရှိ ခြင်းကိုသိပါလျက်နဲ့ ထိုသူများရွေးချယ်ခံရလေအောင် ပြောဆို တွန်းအားပေးမူသည်
ဤကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်များရှိနေပါက သက်ဆိုင်ရာဒေသနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူအများလည်းနစ်နာပြီး တိုင်းပြည်လည်း နစ်နာလာက…
မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ပြည်သူများ၏
ယုံကြည် ကိုးစား အလေးထားမူများသည်လည်းကျဆင်းလာစေပါတယ်။
သည့်အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်က အဖွဲ့အစည်း၏
တာဝန်ပေးမူကို အလွဲသုံးစားပြု ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့နိုင်ငံသည် (10.10.1946) ခုနှစ်
ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာ လိုက်ပြီးချိန်မှအစပြုကာ ယနေ့အချိန်ကာလအထိ မိမိတို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အခြေတကျ
တောင်းပွဲ တိုက်ပွဲတွေနဲ့သာ အချိန်တွေကို
တိုင်းသူပြည်သားများဟာ အစားဆင်းရဲ၊ အနေဆင်းရဲ ပြီးကျပ်တည်းမူ အမျိုးမျိုး
ပြသနာ ဖြစ်ရင် ကျပ်တည်းမယ်၊
ရွေးချယ်ခံအစိုးရ အထက်ကနေခြင်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သော တပ်မတော်၏ ခံယူထားလိုမူ၊
စသည့် စသည့် ပြသနာအားလုံးဟာ မိမိတို့နိုင်ငံမှာ ကောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံရေး အခြေနိုင်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ နိုင်ငံရေးအခြေမချနိုင်တာကလည်း လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက အချင်းချင်း ဖြစ်လာလိုက်တဲ့ရန် ခုအချိန်အထိပါဘဲ။
သုံးခုရှိနေပြီး ခုထက်ထိ အထိုင်ကျနိုင်မူမရှိတာကို မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် မိမိတို့ ပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးက ဝတ်တစ်ခုလို ခံနေကြရပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ သုံးခုလုံးကလည်း အုပ်ချုပ်သူစိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်ပြီး (၂၀၀၈) ကတော့ တပ်မတော်စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။
ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ။
ယခု (၂၀၀၈) က…..
ဒီတော့ကာ နိုင်ငံတစ်ခု၏ တည်တန့်ခိုင်မာမူအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သည်လည်း ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလာခဲ့ရတဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများမှ မကျပ်တည်းရင် မည်သူကများကျပ်တည်းကြမှာလဲ ?
မည်သူက ဆင်းရဲပြီး မည်သူတွေက ချမ်းသာချောင်လည်စေကြမှာလဲ ?
ယနေ့ ပြည်ထောင်စုကြီးကို ပေါက်ဖွားလာစေရန် အုတ်မြစ်ချ ခဲ့တဲ့ ညီလာခံကြီးဆိုရင်မှားနိုင်ပါ့မလား ?
ဒါပေမယ်လို့ မိမိတို့ ၊တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများပါမကျန် အားလုံးက ညီညီ ညွတ်ညွတ် မျှမျှ တတ နဲ့ ကော အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ကြပြီလား ?
ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်များနဲ ပြည်မခေါင်းဆောင်များက ညှိနိူင်း အောင်မြင်ခဲ့ကြလို့ ယခုလို လွတ်လပ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအထဲမှာ ပေါ်လွင်ရပ်တည်လာခဲ့နိုင်တာ မဟုတ်ပါလား ?
ပြည်နယ်၊ပြည်မလို့ခေါ်တဲ့ တစ်ပြည်ထောင်လုံးက ညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်နိုင်ခဲလို့
ထိုညီညွတ်တဲ့ စုပေါင်းအင်အားနဲ့ မိမိတို့
ပြည်ထောင်စုကြီးကို တည်ဆောက် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပေဘူးလား ?
သို့မို့ကြောင့် ယနေ့ မိမိတို့ ပြည်ထောင်စုကြီးကို ပြန်လည်ထူထောင်ကြတဲ့အခါမှာ
ဦးဆောင်နိုင်မည့် ခေါင်းဆောင်နှင့် ထိုခေါင်းဆောင်က အခြေတည်သည့် အင်အားကြီးကာ လူထုထောက်ခံမူ အမြင့်ဆုံးရှိနေပြီး အစိုးရကို ဦးဆောင်ဖွဲ့နိုင်သည့် နိုင်ငံရေး ပါတီက မိမိတို့တိုင်းပြည်မှာ အခရာ မကျပေဘူးလား ?
အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများကို အရေးမပါပါဟူ၍ ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ ဒုတိယ လိူင်း (၂၀၁၅) အထွေထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံသားပြည်သူ အများစုမှ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ခံထားရသည့် လက်ရှိ အစိုးရဖွဲ့ထားနိုင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီသည် (၂၀၂၀)မှာ အစိုးရတစ်ရပ်အဖြစ် ဦးဆောင်ဖွဲ့နိုင်မူသည် အရေးပါလိုအပ်လှပါတယ်။်
(၂၀၂၀) ဖြစ်သည့် ဒုတိယလိူင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် ကောင်းမွန်သော နိုင်ငံရေး
အခြေချ နိုင်စေရန် အလွန်ပင် အရေးကြီးလှပါတယ်။
(၂၀၂၅) /(၂၀၃၀) လောက်တွင် လူထုထောက်ခံမူများ မြင့်တက်လာမည့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည်လည်း ပေါ်ပေါက်လာစေမှာ မလွဲဧကန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
ယခုအခြေအနေတွင် တိုင်းရင်းသားများအရေးကို ဆွေးနွေး ညှိနိူင်းရာ၌ ပြည်နယ်အသီးသီးက ဌာနေ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုငယ်များအရေးကိုလည်း အားလုံးက ဝိုင်းစဉ်းစားကြစေဘို့သည်လည်းအရေးပါ လိုအပ်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး စနစ်သည် တိုင်းပြည် နှင့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် မိမိတို့တစ်ဦးခြင်း၏ အသက်တစ်မျှ အလွန်ပင်အရေးကြီးလှပါတယ်။
တစ်လက်စထဲ (၂၀၁၅) အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယခု အစိုးရဖွဲ့ထားသည့် အနိုင်ရ
NLD ပါတီမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း အားဖော်ပြပါရစေ၊
(၁) တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်ရေး၊
(၂) တိုင်းရင်းသားပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး အေးချမ်းလုံခြုံစွာ လက်တွဲနေထိုင်ရေးကို အာမခံချက်ပေးနိုင်မည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းရေး၊
(၃) ပြည်သူ လူထုအား တရားမျှတစွာ အကာအကွယ်ပေးမည့် အုပ်ချုပ်မူ စနစ်တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ရေး၊
(၄) လွတ်လပ် လုံခြုံစွာ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊
ဟူသည့် ကြွေးကြော်မူဖြင့် (၂၀၁၅) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် လူထု မဲပေး ထောက်ခံမူများဖြင့် အနိုင်ရကာ နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများအားတာဝန်ယူမည့် အစိုးရတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခု (၂၀၂၀) တွင်လည်း အရပ်သားပြည်သူ နိုင်ငံရေးသမားများ ဦးဆောင်ဖွဲ့နိုင်သော လူထုထောက်ခံမူမြင့်မားသည့် အစိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်သည့်အင်အားကြီးနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ရှိလာခြေမရှိနိုင်ခြင်း စသည့် အခြေခံ
အကြောင်းများကို သုံးသပ်ကြပြီး ပြည်သူအများမှ မိမိတို့တစ်ဦးခြင်း၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်မူအခွင့်များကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုံးဖြတ်ကြကာ ဆန္ဒမဲများကို ပေးပါစေကြောင်းနှင့် ပါသင့်ပါထိုက်သူများကိုလည်း မဲပေးရွေးချယ် နိုင်ပါစေကြောင်း…..
နှင့်အတူ (၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည မိမိတို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ကောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံရေးအခြေချ နိုင်မည့် ဒုတိယ လိူင်းဖြစ်ကာ…..
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအသီးသီး………. နှင့်……….
(၂၀၁၅) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရထားသည့်…..
အသီးသီးသော သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံများ နှင့်အတူ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့် ကို ပါတီမှ ရွေးချယ်ထားမည့် ရွေးချယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများအားလုံး၏…..
တာဝန်မှာ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ကောင်းမွန်သည့်နိုင်ငံရေးအခြေချ နိုင်မူအတွက် အဘယ်မျှ အရေးကြီးလှပါကြောင်း……
မိမိတို့တစ်ဦးခြင်းသည်လည်း လက်လှမ်းမမှီပါက အင်အားတစ်ရပ်အနေနှင့် စုစည်းကြ၍
စုပေါင်းအင်အားများအဖြစ် အကျိုးရှိစွာ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ကြပါစေကြောင်း…..
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ် ထူထောင်တည်ဆောက် နိုင်ကြပါစေခြင်းအတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တမ်းခြင်း အဖြစ် ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါစေ။
Forward Media Group လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှ “မုံရွာအောင်ရှင်ပြော” ဟူသည့် အကြောင်းအရာမှာ မှန်ကန်မှ မရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ယုံကြည်မှုနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အပေါ် ပြည်သူလူထုက နားလည်မှု ပေးနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြော